Dhirivhari "Inodedera Rudo" muMoscow - odha maruva
Akanzwa - 2 pc.
Iyi yakasarudzika, yakasvibira, inoshamisa bouquet yemuchena uye wepingi maruva ndiyo yakanakisa kukodzera kana iwe uchida kutsanangura zvaunonzwa kana kuyeuchidza mudiwa wako anodikamwa nezvavo. Maruva akadaro anofarira nechitarisiko chawo, hazvigoneke kukanganwa, uye haugone kuramba usina hanya nazvo!
Kurongedza (firimu netepi) 2pcs., Dhirivhari, Chrysanthemum gwenzi 25pcs.
8494 ₽ Bouquet yeyero chrysanthemums
Kirimu maruva haagone asi kufadza nekugunun'una kwavo kunogunzva uye runako rwakatsetseka. Iyo hombe bouquet yemaruva akadaro ichafarirwa nemukadzi wese. Usarasikirwa nemukana wekupa maruva akanaka maruva e51 kana 101 kirimu maruva.
12197 ₽ Taleya